“Anaga ahaana xidiga aduunka ugu fiican waa Lionel Messi”…Ernesto Valverde – Gool FM
“Anaga ahaana xidiga aduunka ugu fiican waa Lionel Messi”…Ernesto Valverde
Dajiye September 25, 2018
(Barcelona) 25 Sab 2018. Macalinka kooxda Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa kasoo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka ay horyaalka La Liga kula ciyaari doonaan kooxda Leganes, wuxuuna ka hadlay dhowr arimood kooxdiisa ku saabsan.
Luka Modric ayaa ku guulaystay abaal marinta xidiga aduunka ugu fiican ee The Best oo ay FiFA bixiso waxaana abaal marinta lagu gudoon siiyay xaflada magaalada London, Ernesto Valverde ayaana arintan wax laga weydiiyay inta uu ku gudi jiray shirka jaraa’id.
“Lama joogo xili isbarbar dhig ah, anaga ahaan xidiga aduunka ugu fiican waa Lionel Messi, laakiin Modric waa ciyaaryahan aad u wanaagsan, wuxuuna bixiyay sanad cajiib ah”.
Macalinka reer Spain ee Ernesto Valverde ayaa sidoo kale wax laga weydiiyay sababta ay Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi xaflada FIFA ee xalay ka dhacday magaalada London ee dalka England.
“Marka lagaa casuumo xaflad, waxaad heysataa xuriyad ah inaad aado ama inaadan tagin, sababtoo ah laguma qasbi karo”.
Klopp oo si weyn u amaanay dhigiisa Maurizio Sarri kahor kulanka kooxaha Liverpool iyo Chelsea
“Cristiano Ronaldo wuxuu ku jiraa qalbiyada dhamaan jamaahiirta kooxda Real Madrid”… Florentino Perez